N’Golo Kante Oo Ugu Dambayn Beddelay Baabuurkii Yaraa Ee
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee N’Golo Kante ayaa ugu dambayntii soo bandhigay muuqaalka baabuurka cusub ee uu iibsaday oo uu kula barbarreeyey ciyaaryahannada kale ee kubadda cagta ee noocyada ugu dambeeyey ee gawaadhida qaaliga ah wata.
N’Golo Kante oo lagu tilmaamo ciyaartoyga ugu akhlaaqadda badan ee kubadda cagta ku jira, xishood dartiina waxyaabo badan oo ay laacibiinta kale sameeyaan uga joogsada, ayaa waxa uu caan ku noqday baabuur yar oo Mini Coopere ah oo uu iibsaday sannadkii 2015 markii uu ku biiray Leicester City, xilligaas oo lacag fiican aanu haysanin.
Koobkii Adduunka 2018 ee uu Faransiiska kula guuleystay kaddib, waxa warbaahintu si aad ah u qaadaa-dhigtay hab-nololeedka iyo dabacsanaanta laacibkan ee dhifka ku ah garoomada.
Ciyaartii finalka Koobka Adduunka markii ay ku guuleysteen, waxa layaab noqotay sidii uu u salaamay Ra’iisal Wasaaraha Croatia oo ahayd shaxshaxlayda tartankaas qurxisay ee lebbiskeeda iyo qaabka timaheeda ay ka dhigto ay xattaa mararka qaarkood ka saamayn badnaayeen kulamo waaweyn oo dhacaya.
Markii garoonka dhexdiisa lasoo galay ee ay ciyaartoydu isku sawirayeen Koobka, N’Golo Kante waxa uu ku dhowaaday in isaga oo aanay gacmihiisu taabannin koobka ay garoonka ka baxaan, illaa uu xilli dambe arkay AxadleTM kale oo la socday xishoodkiisa iyo sida uu marba u sugayay inta ciyaaartoyda kale ay soo dhamaysanayaan inay isku sawiraan.
Sida uu ula nool yahay hooyadii iyo baabuurkiisa yar ee nooca hore ah ee qiimihiisu yahay £20,000 Gini ayaa iyaduna noqotay hadal-hayn kale, sababtoo ah, usbuucii ay £290,000 Gini.
Mini Cooper uu qiimihiisu yahay 20,000 Gini, waxa uu Kante watay tan iyo markii uu ku biiray Leicester City
Laacibkan ku guuleystay Koobka Adduunka, Laba Premier League, FA Cup iyo Europa League, sidoo kalena sannadkii 2017 noqday xiddiga ugu fiican horyaalka Premier League, PFA iyo FWA ayaa waxa uu November 2018 loo kordhiyey lacagtii uu ka xoogsan jiray Chelsea oo markii hore ahayd £150,000, waxaana looga dhigay £290,000 Gini.
Si kastaba, Kante ayaa tababarkii Salaasadii waxa uu kaga yaabsaday laba arrimood oo ahaa inuu timo dhaadheer oo aan looga baranin lasoo laabtay iyo baabuur noociisu yahay Mercedes oo la mid ah kuwa ciyaartoyda kale ee asxaabtiisu ay wataan.